ला ग्रान्डी कलेजमा खेलकुद | eAdarsha.com
ला ग्रान्डी कलेजमा खेलकुद
पोखरा । ला ग्रान्डी इन्टरनेसनल कलेज, सिमलचौरमा बिबिए, बिपिएच कार्यक्रमका विभिन्न सेमेस्टर पढ्ने विद्यार्थीबीच खेलकुद प्रतियोगिता भएको छ ।
छात्रा तथा छात्रतर्फ फुटसल, भलिबल, बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, टेबलटेनिस र चेस खेल खेलाइएको प्रिन्सिपल इ. किरण केसीले जानकारी दिए ।
फुटसल छात्रतर्फ बिबिए आठौं सेमेस्टरका विद्यार्थी प्रथम र बिबिए संकाय दोस्रो सेमेस्टरका विद्यार्थीको समूह दोस्रो भयो । म्यान अफ दि म्याच अतीत गुरुङ तथा सर्वाधिक स्कोरर साइमन गुरुङ तथा बेस्ट किपर अनमोल गुरुङ बने ।
छात्रातर्फ बिपिएच संकायका विद्यार्थीले प्रथम र बिबिए आठौं सेमेस्टरका विद्यार्थीको समूह दोस्रो भयो । बिपिएच संकायकी सम्झना पौडेल बेस्ट प्लेयर घोषित भइन् ।
ब्याडमिन्टन छात्रतर्फ बिबिए आठौं सेमेस्टरका विद्यार्थी अनमोल गुरुङ र अतीत गुरुङको जोडी प्रथम र बिबिए छैटौं सेमेस्टरका विश्व अधिकारी र दीक्षान्त पौडेलको जोडी दोस्रो भयो ।
ब्याडमिन्टन छात्रामा बिसिए चौंथो सेमेस्टरका आस्था श्रेष्ठ र सम्झनाको जोडी प्रथम तथा बिबिए आठौं सेमेस्टरका सुशील गुरुङ र कुसुमको जोडी दोस्रो भयो ।
बास्केटबल छात्रतर्फ बिबिए छैटौैं सेमेस्टर प्रथम र बिबिए चांैथो सेमेस्टर दोस्रो भयो भने छात्रा बास्केटबलमा बिबिए आठौं समेस्टर र बिबिए चौथो सेमेस्टर पहिलो र दोस्रो भयो ।
टेबलटेनिस छात्रामा बिसिए दोस्रो सेमेस्टरका आस्था श्रेष्ठ र सिम्रन शिल्पकारको जोडी प्रथम र बिबिए आठौँ सेमेस्टरका विद्यार्थी सुशील गुरुङ र टेरिसा गुरुङको जोडी दोस्रो भयो ।
टेबल टेनिस छात्रमा बिबिए आठौैं सेमेस्टरका अनमोल गुरुङको जोडी प्रथम तथा बिबिए चौथो सेमेस्टरका कुशल देवकोटा र आशीष क्षत्रीको जोडी दोस्रो भयो ।
चेसमा बिबिए दोस्रो सेमेस्टरका आशीष पौडेल प्रथम तथा बिसिए छैटौं सेमेस्टरका आशीष बराल दोस्रो भए ।
प्रिन्सिपल इ. किरण केसीले विजेतालाई पुस्कार, मेडल, ट्रफी तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको बताए ।
कलेजका निर्देशक इ. शिवराज बरालले खेलले विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा मद्दत पुग्ने बताए ।